कुन हेर्ने, ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ कि ‘ह्याप्पी डेज’ ? « Ramailo छ
कुन हेर्ने, ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ कि ‘ह्याप्पी डेज’ ?
यो शुक्रबार दुई नयाँ नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । नायिका केकी अधिकारीले निर्माण गरेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ र मिलन चाम्स निर्देशिक ‘ह्याप्पी डेज’ बिच हलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । दुई फिल्म बारे छोटो चर्चा गरौं :
केकीको पहिलो निर्माण रहेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’लाई विशाल भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियो निर्देशक भण्डारीको यो डेव्यु निर्देशकिय फिल्म हो । कमेडी फिल्ममा केकीसँगै नायिका प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, बुद्धि तामाङ, विनोद न्यौपाने, रविन्द्र झा, कुशाग्र भट्टराई लगायतको अभिनय छ । फिल्ममा समावेश काउ संग र यसको प्रोमोलाई दर्शकले रुचाएका छन् । केकी र प्रियंकासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
मिलन चाम्स निर्देशित फिल्म ह्याप्पी डेज मा अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको मुख्य भूमिका छ । चाम्स ईन्टरटेनमेन्ट र लण्डन सिने आइको संयुक्त निर्माण रहेको फिल्ममा दया र प्रियंकासँगै संजय गुप्ता, विक्की जोशी, जेनिहा लिम्बु, मोनिका, रुपा पुन, रितेश चाम्स, जेन विकल, हुप थापा लगायतको अभिनय छ । लण्डनमा छायाँकन गरिएको ह्याप्पी डेजको चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गो बोलको गीतलाई दर्शकले रुचाएका छन् । ‘ह्याप्पी डेज’ प्रचारका लागि गरिएको बग्गी यात्राको भिडियो हेर्नस् :